थोत्रा टायरको उपयोगिताः कुर्सीदेखि सोफासम्म ! - Video blogging portal of Nepal
थोत्रा टायरको उपयोगिताः कुर्सीदेखि सोफासम्म !
आन्दोलन र हड्तालमा जलाउन मात्र प्रयोग हुने थोत्रा टायरको उपयोगिता यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने उदाहरण दिएको छ टायर ट्रेजर । थोत्रा टायरबाट आकर्षक फर्निचर बनाएर उनीहरुले यसको व्यवस्थापनमा हात बाँडेका त छन् नै उद्यमशीलता पनि देखाएका छन् ।
यत्रतत्र फालिएका सवारी साधनका थोत्रा टायर जम्मा पारेर युवाहरुले टेबल, कुर्सी, सोफा लगायत घरायसी र कार्यालयको प्रयोजनमा प्रयोग हुने सामग्री बनाउँदै आएका छन् । तिनै उद्यमशीलहरुको कथा यस पटक नेपाल चित्रमा ।